MAXON US ၏ဥက္ကဌ / အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Paul Babb နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » ရှင်ပေါလု Babb သမ္မတ / MAXON အမေရိကန်၏ CEO ဖြစ်သူနှင့်အတူ Q & A
မေး: သင်ကာတွန်းစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်တယ်နှင့်မည်သို့ဒီဖန်တီးမှုအသိုင်းအဝိုင်းမှ 3D tools တွေကိုမြှင့်တင်ပေါ်တွင်သင်၏အမြင် shaped ထားပြီးပုံကိုပြောပြပါ?
PB: UCLA မှာဘွဲ့ရကျောင်းတွင်မတက်ရောက်နေစဉ်, ငါအများအပြားကြော်ငြာအေဂျင်စီများမှာ freelanced ။ ငါဒီဇိုင်နာနှင့် copywriter နှစ်ဦးစလုံးအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သည်အခြားရေးရာထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာကျောင်းဆင်းပွဲအပေါ်သို့ကျွန်မအလွတ်တန်းအားထုတ်မှုဆက်ပြောသည်။ ငါစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်အထဲကစတင်ခဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုငါ့ကိုအနုပညာရှင်တွေနေ့တိုင်းဖြတ်သန်းသွားရာ၏တစ်ဦးနားလည်မှုပေးသည်ယုံကြည် - နည်းပညာနှင့်အတူရုန်းကန်, သတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံမင်္ဂလာ clients များစောင့်ရှောက်ခြင်း, etc
ကျွန်မပထမဦးဆုံးကျနော်လျှပ်စစ်ပုံရိပ်အားဖြင့်ငှားရမ်းထားသောအခါကာတွန်း software ကို 3D မှမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ 25 နှစ်ကျော်ခဲ့, ဒါကြောင့်ငါနှစ်ပေါင်းများစွာအတော်လေးသိသိသာသာစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲမှုကိုမြင်ရပါတယ်။
မေး: ထူးခြားသောအကြောင်းကိုဘာလဲ MAXON'' s ကိုစျေးကွက်မှချဉ်းကပ်?
နှင့်အညီ, ယနေ့ငါရဲ့ 3D နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေနဲ့အတူချဲ့မနေတော့နေဖို့ပေမယ့်ရှုပ်ထွေး features တွေချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ 4D အနုပညာရှင်မှလက်လှမ်းစေရန်၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုသာမဟုတ်ဘဲကျနော်တို့ရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးအဖွဲ့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဝန်ခံဖို့ရှိသည်။ ဖန်တီးမှုစကားရပ် 3D အတွက်ချောမွေ့စွာဖြစ်စဉ်ကို Making မျှသေးငယ်တဲ့လုပ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
PB: ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး "စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမှာ" ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တစ်ဦးစကားပြောဆိုမှုမပြုရှိခြင်းအကြောင်းပါ။ စကားပြောဆိုမှုအရာအားလုံးမောင်း။ တစ်ခုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစကားပြောဆိုမှုအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံပူးပေါင်းနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်မသာ, ကဖောက်သည်များ၏ကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးသို့ရောက်ရှိရန်မရှိမဖြစ်သောအရာ, အသိုင်းအဝိုင်း cultivates ။
ကျနော်တို့အများဆုံးအံ့သြဖွယ်အနုပညာအသုံးအနှုန်းတွေကိုမကြာခဏတခြားသူတွေရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုမျှဝေအားဖြင့်ဖြစ်စေခဲ့သည်နေကြသည်ရှာဖွေတွေ့ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့အခြားသူတွေရုပ်ရှင်ရုံ 4D နှင့်အတူဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုမျှဝေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်လာအောင်နှိုးဆွဖို့ချစ်ကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့အလုပ်နှင့်ကိုယ်နှိုက်၏ဖှယျဖြစ်ပါတယ်မြှင့်တင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ကြလော့။
ပညာရေးသည်လည်းငါတို့ကြီးထွားလာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွမ်းကျင် 3D Animation စိုက်ပျိုးဖို့အရေးကြီးတယ်။ ထူးချွန်အနုပညာရှင်တွေများအတွက်ကြီးမားတဲ့ဝယ်လိုအားရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကအမြဲကြောင်းသင်ယူမှုကွေးကိုအတိုကောက်ဖို့နည်းလမ်းတွေရှာနေ; က Cineversity နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုမှတစ်ဆင့်င်ရှိမရှိ (www.cineversity.com) သို့မဟုတ်အခြားအွန်လိုင်းလေ့ကျင့်ရေးအရင်းအမြစ်များ, ပညာရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မိတ်ဖက်မြှင့်တင် / ကူညီသည်။
လှုံ့ဆျောမှု, လှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့ မှစ. အနုပညာရှင်မောင်း။ တစ်ခါတစ်ရံလေ့လာသူသင်ယူဖို့အကြောင်းပြချက်လိုအပ်ပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံအနုပညာရှင်ကိုဖန်တီးရန်အားပေးစကားလိုအပ်ပါတယ်။ ထိုသို့အခြားသူများကိုအားပေးရနျကြှနျုပျတို့၏အရှိဆုံးတတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့အသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်ရန်လိုအပ်သောရဲ့ကြိမ်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာရှေ့ကိုပြောင်းရွှေ့စျေးကွက်စောင့်ရှောက်ဖို့ထိုသူအပေါင်းတို့သည်လှုံ့ဆျောကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ပါပဲ။
အဘယ်အရာကိုခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုသင် 3D အတွက်ကြည့်ရှုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အနာဂတျအကွောငျးကိုသင် excites သလဲ?
PB: အနုပညာရှင်တွေများအတွက်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်ရှိခဲ့သည်ဘယ်တော့မှရဲ့။ အနုပညာရှင်တင်းကျပ်စွာသတ်မှတ်ရက်နှင့်ဘတ်ဂျက်အားဖြင့်စိန်ခေါ်ခံရဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, နည်းပညာနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပါပြီ။ ရွေ့လျားမှုဂရပ်ဖစ်အတွက် 3D ကာတွန်းများအတွက်ဝယ်လိုအားကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော virtual reality, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်, လုပ်ခဲ့ပြီးအဖြစ်မှန်နှင့်ပိုပြီးအဖြစ်ဒေသများရှိအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားထွန်းသစ်စ - အစဉ်အလာရုပ်ရှင်, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ဂိမ်း niche ကျော်လွန်ပြီး - ဒစ်ဂျစ်တယ်အနုပညာရှင်များအတွက်န့်အသတ်အခွင့်အလမ်း, ဆိုလိုတာက 3D အကြောင်းအရာဖန်တီးမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်အရာကို NAB မှာသင့်ရဲ့ပြသခဲ့သည်ပါဝင်မှုဒီနှစ်အကြောင်းကိုအများဆုံးသင်သည် excites?
PB: ကျနော်တို့ဒီနှစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲမှာတင်ဆက်ထားပါတယ်ဧည့်သည်အနုပညာရှင်များအများဆုံးအံ့သြဖွယ်လိုင်း-Up ရှိသည်။ သင်ပြုရန်ရှိသည်အားလုံး (ကျွန်တော်ပြပွဲမှလာမယ့်ပါပြီအနုပညာရှင်များ၏တန်းစီဇယားကိုကြည့်နေသည်C4DLive.comငါဒါစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်အဘယ်ကြောင့်) နှင့်သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ပြုလုပ်မျက်နှာ-to-မျက်နှာတုံ့ပြန်ချက် get အဖြစ်အတူတကွအချို့သောလူမှုရေးအချိန်ဖြုန်းဖို့အမြဲအကြီးပါပဲ။ MAXON တက်ရောက်ပြသရန်အနုပညာရှင်-ဖော်ရွေသတင်းအချက်အလက်ပေးဘို့အများနှင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပျော်စရာဖြစ်ရပ်များ hosting များအတွက်လူသိများသည်။ အဆိုပါမီဒီယာကို Motion Ball ကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ Pinball ပါတီ NAB ၏နှစ်ပတ်လည်အဓိကဖြစ်ကြသည်။
EJ Hassenfratz မှာသူဟာ Emmy Award ဆု-အနိုင်ရဖန်တီးမှုဒါရိုက်တာနှင့်အတူ Q & A Eyedesyn နှင့်လူသိများတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံ 4D အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှင့်သင်တန်းဆရာ
သင့်အနေပေါ်မှာမကြာခဏဧည့်သည်တင်ဆက်သူဖြစ်ရပြီ MAXON ကုန်သွယ်မှုပြပွဲနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကအထူးဖြစ်ရပ်များမှာအဓိကဇာတ်စင်။ အဘယ်အရာကိုရုပ်ရှင်ရုံ 4D အသိုင်းအဝိုင်းအတှေ့အကွုံမြားအကွောငျးနှင့်မည်သို့ဤသူသည်သင်တို့အနုပညာရှင်တစ်ဦးအဖြစ်ကြီးထွားဒီကူညီပေးခဲ့တယ်ထွက်ရပ်?
EJ: MAXON ကုန်သွယ်ရေးမှာတင်ဆက်ကိုင်ပြီးအားဖြင့် C4D အသိုင်းအဝိုင်းမြှင့်တင်ရေး၏အံ့သြဖွယ်အလုပ်တစ်ခုပြုတော်မူပြီထိပ်တန်းအနုပညာရှင်အသုံးပြုသူများသုံးစွဲနိုင် လုပ်. လွတ်လပ်စွာသူတို့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကိုမျှဝေဖို့ပလက်ဖောင်းပေးထားကြသည်ရှိရာ, workflow နှင့်နည်းစနစ်ပြပွဲတက်ရောက်လာအောင်နှိုးဆွပေမယ့်အကြီးအကျယ်အွန်လိုင်းဖြစ်ရပ်များသို့လှည့်မသာကွောငျးဖျောပွသ ။
ဤရွေ့ကားတင်ပြချက်များဟာ C4D အသိုင်းအဝိုင်းအဘယ်သူအားမျှမှဒုတိယပင်ဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်တစ်စုံလင်သောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအသိုင်းအဝုိင်းရဲ့အစွမ်းသတ္တိကိုအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်မျှဝေခြင်းနှင့်ကူညီခြင်း, နိုင်အောင်၎င်း၏ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်ပြီး, ဤဖြစ်ရပ်များအားလုံးအကြောင်းကိုတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ငါ့အဘို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ကငါ့ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ငါမဆိုအခြားလမ်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ခဲ့ကြတော့မှဤဖြစ်ရပ်များမှာမိတ်ဆက်ပြသသောအနုပညာရှင်၏ဗဟုသုတနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုဖို့ထိတွေ့မှု၏ဤမျှလောက်များစွာသောပါရမီလူမြိုးမှဤမျှလောက်သင်ယူဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ရုပ်ရှင်ရုံ 4D Cineversity EJ Hassenfratz Eyedesyn MAXON ရှင်ပေါလု Babb ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2015-04-29
ယခင်: Vidcheck အရောင်းမန်နေဂျာအဖြစ်ဟင်နရီ Keyser ခန့်အပ်
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့်ဖြေရှင်းနည်းများ် OB ဗင်၏ပြီးပြည့်စုံသောမိသားစုတင်ဆက်